अमेरिकामा बेवारिसे बन्यो दान बहादुरको शब
११ जुलाई, अमेरिका । अमेरिकामा भर्जिनियाको शब गृहमा एक नेपालीको बेवारिसे शब फेला परेको छ । ४९ दिन देखि भर्र्जििनयाको शवगृहगृहमा बेबारिसे रुपमा दोलखा जिल्लाका स्व. दान बहादुर तामांङको शब बेवारिसे अवस्थामा रहेको पत्ता लागेको छ । स्व तामांगको मृत शरिर भर्जिनियाको फेयरफ्याक्स काउन्टीका प्रहरीले मे महिनाको अन्त्यतिर कुनै पार्कमा फेला पारेको अमेरिकाबाट डिक बहादुर तामाङले इनेप्लीजमा लेखेका छन् ।
नेपाली हो भनेर पत्ता लगाएपछि मे महिनाको २८ तारिखको दिन नेपाली राजदूताबासमा खबर भएको बुझिएको छ । तर, दुर्भाग्यवस मृतकको साथमा नेपाली राहदानी नभएको कारण दूताबासले नजिकको नातालाई वा तामांङ सोसाइटी ग्रेटर वाशिंगटनलाई खबर गर्न नसकेको अबस्था बनेको छ ।
सुकिला इन्दु समाजका चार जात छतिस बर्णका जोसुकै हुन् धनी ,गरिब, अग्ला होचा महिला पुरुष अथवा कुनै प्राणीले जन्मेपछि मृत्युलै स्वीकार्नु पर्छ मृत्युको पनि आफ्नै प्रकार छ सास्वत सत्य हो ।
मक्लिनको एउटा भोजनालयमा काममा लागे पछि यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो दर्ज सेफ बने । उनको सबैभन्दा प्यारो संस्था तामांग सोसाइटी ग्रेटर वाशिंगटनका सदस्य बनेर हरेक काममा अघि सरेर काम गर्थे ।
खबर नगरेको कारण मृतकको लास ४९ दिनसम्म अमेरिकाको मोर्गमा बेबारिसे अवस्थामा बसेको छ । नेपालीहरुले थाहा पाए पछि, दाह संस्कार गर्न उनकी छोरीलाई आफ्नो बाबुको अनुहार देखाउन अमेरिकामा झिकाउन नेपाली राजदूतावास र तामांङ सोसाइटी ग्रेटर वाशिंगटन पदाधिकारीहरु लागि परेका छन् ।
आफ्नो राहदानी साथमा बोकेर हिंडेको भए, राहदानीको पछिल्लो पानामा नजिकको नाताको नाम ठेगाना र फोन नम्बर लेखेको भए राजदूताबासले तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न सक्थ्यो तर त्यो अवस्था भएन ।
आज ४९ दिन पुगेकोले उनको नाममा तामांग सोसैत्य्ले पूल्स्विल्स स्थित निग्मा परम्परा अनुसार प्रार्थना सभा हुदैंछ, महसुस गरि रहनु भएको छ, नेपाली राजदूतावासको के काम ? हाम्रो मानिसको यस्तो अबस्थामा पुग्दा पनि हामीले खबर नपाउनुको कारण के ?